Uhlobo olusha lwe-Darktable 3.0, liza ne-interface evuselelwe nokuningi | Kusuka kuLinux
Uhlobo olusha lwe-Darktable 3.0, luza ne-interface evuselelwe nokuningi
Ngemuva konyaka wentuthuko iyasebenza, kwamenyezelwa ukwethulwa kwenguqulo entsha yohlelo lokuhlela nokucubungula izithombe zedijithali I-3.0 emnyama. Okumnyama isebenza njengenye indlela yamahhala ye-Adobe Lightroom futhi igxile emsebenzini ongonakalisi onemifanekiso eluhlaza.
I-Darktable inikeza ukukhethwa okukhulu kwamamojula ukwenza zonke izinhlobo zokusebenza kokucubungula izithombe, ikuvumela ukuba ugcine i-database yezithombe zomthombo, unikeze ukuzulazula okubonakalayo ngezithombe ezikhona futhi, uma kunesidingo, wenze imisebenzi yokulungisa ukuphazamiseka nokwenza ngcono ikhwalithi, ukugcina isithombe sokuqala nawo wonke umlando wokusebenza nakho. Ikhodi yephrojekthi isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense ye-GPLv3.
1 Yini okusha ku-Darktable 3.0?
2 Ungayifaka kanjani i-Darktable 3.0 ku-Linux?
Yini okusha ku-Darktable 3.0?
Phakathi kwezinto ezintsha ezintsha zale nguqulo entsha, singakuthola ngokushesha lokho isikhombimsebenzisi sakhiwe kabusha ngokuphelele nokushintshela ku-GTK / CSS.
Zonke izinto zesikhombimsebenzisi manje zingalawulwa kusetshenziswa izingqikithi ze-CSS, kanye nakho kulungiselelwe uchungechunge lwezihloko elungiselelwe ukusetshenziswa kuma-monitor monitors aphansi nangaphezulu.
Ngaphezu kwalo Sizokwazi ukuthola izinhlobo ezintsha ze- «film tone curve» kanye ne- «equalizer tones» modules. Amamojula ahlinzeka ngezindlela ezinamandla zokusebenza ngezithombe futhi zingashintsha ngokuphelele amamojula we- "base curve", "shadow and light" kanye ne "tonal display".
Imodi engeziwe gcina imibala kumodyuli "Ijika lesisekelo".Le modi inikwe amandla ngokuzenzakalela (kumodi "Ekhanyayo") futhi ingashintsha kakhulu ukubonakala kwamafayela amasha angenisiwe ngokuqhathaniswa namafayela we-JPEG adalwe yikhamera.
Futhi amamojula amasha «amazinga e-RGB» ne «RGB ithoni ijika«, Okuvumela ukusebenza ngeziteshi ngazinye esikhaleni se-RGB, ngaphezu kwamamojula akhona asebenza endaweni yeLab.
Ithuluzi lombala we-eyedropper kumamojula we-Blend, Tone Curve, Colours Zones kanye ne-Brightness, asekela ukukhethwa kwenani elijwayelekile lendawo ekhethiwe (Ctrl + chofoza isithonjana se-eyedropper).
El shintsha umlando manje ukhombisa amamojula "wesistimu" afihliwe ngaphambilini. Isithonjana sikhombisa isimo samamojula emlandweni.
Ukusekelwa kokunikeza ama-hotkey ngezilayida ngazinye. Isibonelo, izilawuli zesinxephezelo sokuchayeka. Lokhu kuvula ithuba lokuhlelwa okusheshayo kusetshenziswa izilawuli ezikhethekile ezikude.
Kungezwe ibhokisi ukuze kulungiselelwe imethadatha ethunyelwe ngaphandle, ikuvumela ukuthi ulawule ukuthunyelwa kwedatha ye-Exif, amathegi, isikhundla sabo sobukhosi, nedatha ye-geotagging.
Kwezinye izinguquko esingakuthola:
Ukusekelwa kokuhlela kabusha amamojula ngendlela asetshenziswe ngayo esithombeni (Ctrl + Shift + Hudula).
Imodyuli entsha "Amatafula Wokubheka Umbala we-3D" ene-Hald-CLUT ne-Cube PNG support.
Ukusekelwa kokuhlehlisa / ukwenziwa kabusha kwemodi elula yamalebula, amalebula ombala, ukuhlukaniswa, imethadatha, umlando wokuhlela nezitayela ezifakiwe.
Ukusekelwa kwama-raster masks (uhlobo olukhethekile lwemaski ye-parametric).
Izithombe zeteyipu ezenziwe kabusha nezindlela ze-histogram.
Ishintshe imodyuli yokunciphisa umsindo yephrofayili. Kungezwe ukusekelwa kwamaphrofayela amasha ekhamera.
Imodyuli entsha "Yezilungiselelo Eziyisisekelo", ekuvumela ukuthi ulungise ngokushesha amaphoyinti amnyama, amhlophe nampunga, ushintshe ukugcwaliswa bese ubala ngokuzenzakalela ukuvezwa kwesithombe.
Ukusekelwa kokuseshwa okusheshayo kwamamojula ngamagama.
Kungezwe imodi yokukhetha isithombe (ukuqhathanisa ngababili).
Ihanjiswe kusuka kumicu ye-POSIX yaya ku-OpenMP.
Ukusebenziseka okuningi kuye kwenzelwa i-SSE ne-OpenCL.
Kungezwe ukusekelwa kwamakhamera amasha angaphezu kwama-30.
Ukusekelwa kwe-Google Photo API entsha enekhono lokwenza ama-albhamu ngqo kusuka kokumnyama (okungasebenzi ngalesi sikhathi ngenxa yokuvinjelwa yi-Google).
Ungayifaka kanjani i-Darktable 3.0 ku-Linux?
Abasebenzisi be I-Debian, Ubuntu, i-Linux Mint noma okunye okuphuma kukho kwalokhu kufanele bathayiphe ukuphela:
Okwalabo abasebenzisa I-Fedora noma yikuphi ukusatshalaliswa okususelwe kuyo, umyalo okufanele bawusebenzise ngu:
Uma kunjalo abasebenzisi banoma yiluphi uhlobo lwe-OpenSUSE Ungabuyekeza uhlelo lokusebenza ngosizo lwe-YaST noma ku-terminal, vele uthayiphe:
Abasebenzisi be I-Arch Linux, iManjaro, i-Antergos, i-Arch Labs nezinye izinto ezivela ku-Arch Linux faka uhlelo lokusebenza nge:
Okwalabo abasebenzisa Gentoo noma iFuntoo, faka uhlelo lokusebenza nge:
Ekugcineni, kwe I-RHEL, i-Scientific Linux, i-CentOS noma abasebenzisi abavela kumele bathayiphe okulandelayo:
Okokugcina uma isibuyekezo singakatholakali ekusatshalalisweni kwakho, ungahlanganisa uhlelo lokusebenza ngokulandelayo. Okokuqala sithola ikhodi yomthombo nge:
Futhi siqhubeka nokuhlanganisa nokufaka nge:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Uhlobo olusha lwe-Darktable 3.0, luza ne-interface evuselelwe nokuningi
Ngemuva kwama-patches aphuthumayo, inguqulo entsha yeWireshark 3.2.0 ifika nalezi zinguquko
Indlela Yokuziphatha yamaphrojekthi Womthombo Ovulekile